UX Dhizaini uye SEO: Mashandisiro anoita Aya maWiri maWebhusaiti Zvinhu pamwechete kune yako Kubatsira | Martech Zone
UX Dhizaini uye SEO: Mashandisiro anoita Aya maWiri mawebhusaiti Zvinhu pamwe chete kune yako Kubatsira
China, January 31, 2019 Chishanu, February 1, 2019 John Vuong
Nekufamba kwenguva, zvinotarisirwa pamawebhusaiti zvakashanduka. Izvi zvinotarisirwa zvinogadza zviyero zvekugadzira ruzivo rwevashandisi iro saiti inofanira kupa.
Neinjini dzekutsvaga 'chishuwo chekupa yakanyanya kukosha uye inogutsa mhedzisiro pakutsvaga, zvimwe zvinhanho zvinofungidzirwa. Chimwe chezvakanyanya kukosha mazuva ano chiitiko chevashandisi (uye akasiyana masayiti epamhepo anopa kwairi.). Izvo zvinogona, saka, kufungidzirwa kuti UX yakakosha chikamu chekutsvaga injini yekugadzirisa.
Uine izvi mupfungwa, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekugadzira yako UX zvine hungwaru. Nekukwanisa kupa UX inorumbidzwa, uri kuwedzera kuwedzera yako saiti SEO.
Dzinotevera nzira dzekuti ungakwidziridze sei dhizaini yeUX inogona kushandiswa kunyatso kugadzirisa ino nzvimbo yezviito zvako zveSEO:
Kutaurirana Ruzivo rwekuvaka muSiti yako
Imwe yeiyo zvakakosha zvezvinhu zveUX dhizaini ndiwo marongero ako ruzivo. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti yako saiti inofanirwa kuve neinoshandiswa-inoshamwaridza ruzivo rwekuvaka kuti uve nechokwadi chekuti vashandisi vako vanokwanisa kuzadzisa zvinangwa zvavo newebsite yako. Chinangwa ndechekuona kuti ipapo iwe unozokwanisa kupa yakajairwa saiti dhizaini iri nyore uye yakajeka, ichibvumira vashandisi kuti vawedzere kushandiswa kwewebsite yako nekuda kwavo chinangwa.
Apple's Desktop uye Mobile View
Kugadzirisa Webhusaiti Navigation
Chimwe chinhu cheUX dhizaini yekufunga nezve yako saiti yekufambisa. Kunyangwe iri yakajeka pfungwa yekuti uve nechirongwa chekufamba chinogonesa vashandisi kuti vaende zvakatsiga kunzvimbo dzakasiyana dzesaiti yako, kwete ese masosi anogona kuzviita izvo. Iwe unofanirwa kushandira pakuuya neinoshanda yekushambadzira scheme iyo inotarisira kupa iri nyore nzira yekutenderera yako saiti.
Izvo zvakanakisa kuronga yako saiti yekufambisa sisitimu mune yakasarudzika.
Chikamu chekutanga chehukuru hwako ndiko kufamba kwako kukuru uko kune iwo akajairika mapeji ewebhusaiti yako. Kufambisa kwako kukuru kunofanirwa kunge kune bhizinesi rako 'zvekutanga zvipo, pamwe nemamwe mapeji akakosha anofanirwa kuve neyako saiti senge Nezvedu peji.
Yako yechipiri-nhanho yekufambisa ndeyako yekushandisa yekufambisa iyo zvakare yakakosha mapeji esaiti yako, asi pamwe haina kukosha seayo aizoiswa pane huru yekufambisa. Izvi zvinogona kusanganisira Bata nesu peji, uye mamwe mapeji echipiri ewebhusaiti yako.
Iwe unogona zvakare kutora akawanda-nhanho, kana mega yekufambisa umo menyu yako inogona kutungamira kune sub-menyu. Izvi zvinobatsira kwazvo kubvumira vashandisi vako kuti vachere zvakadzika mune yako saiti kubva pane ako ekufamba mabara. Ichi zvakare chisarudzo chekufamba-famba kumabhizinesi ane akawanda zvigadzirwa kana masevhisi ayo anogona kuvhenekerwa muzvikamu zvakasiyana. Nekudaro, chinetso cheichi ndechekuona kuti yako menyu mamabara achashanda nemazvo sezvo paine mamwe masayiti ane menyu emabhawa anodonha kunyangwe usati wasvika pane raunoda peji.
Zvekare, zano nderekuona kuti iwe unozokwanisa kupa vashandisi vako kugona kwekukurumidza uye zvakanaka kutenderera yako saiti. Dambudziko ndiko kugadzira a mushandisi-yakatarisana nekufamba scheme izvo zvinokwanisa kuzadzikisa izvo.
Shanda pakuvandudza yako Webhusaiti Speed
Nzvimbo inotevera inobata ruzivo rwevashandisi ndiko kumhanya kwewebhu webhusaiti. Izvo zvakakosha kuti saiti yako ikwanise kurodha nekukurumidza, kana iwe unogona kuisa panjodzi kurasikirwa kukuru.
Kana yako saiti ikakundikana kutakura mukati memasekonzi matatu, yako mabhureti maitirwo aizoenda pamusoro pemba. Asi kwete chete iro peji rako rinofanira kupa nekukurumidza, asi iwe zvakare unofanirwa kukwanisa kubvumira vashandisi vako kuchinjira kune mamwe mapeji mushe.
Kugona kuzadzikisa izvi, yako saiti inofanirwa kutanga yaona kuti yako saiti iri kumhanyisa pazvivakwa zvine hunyanzvi. Seva dzako kana sevhisi yekubata iwe yawakawana inokwanisa kukwanisa kutsigira saiti yako uye nhamba yevashandisi vaizoishanyira, vachiona kukurumidza kurodha kune vese.
Rimwe danho nderekuona kuti yako saiti yakareruka, isina mahwindo enhau anorema ayo anogona kukonzera kushushikana pane yako saiti. Iyo pfungwa yakanaka kuve nemafaira akasiyana enhau, asi aya anofanirwa kuchengetwa pahukuru hushoma, uye chete kana zvichidikanwa.
Dhizaini yeUX Inofanirwa kuve Yekutendeuka-Inoshamwaridzika
Flat dhizaini yazvino vector muenzaniso pfungwa yewebhusaiti kushandurwa kwekushanduka kukura, webpage yekutsvaga injini optimization, webhusaiti kuongorora uye kugutsikana kwemukati. Isolated pane yakashongedzwa ruvara kumashure
Kuona kuti yako saiti dhizaini yeUX ichaunza kudzoka, iwe unofanirwa kuigadzira nekutendeuka mupfungwa. Izvi zvinosanganisira kushandiswa kwesimba-yekuita-chiito, pamwe nedzimwe nzira dzekutendeuka-dzana.
Asi zvakare ita shuwa kuti kunyangwe iwe ukaisa kuyedza kukuru mukukurudzira kutendeuka, haupfuure bhodhi uye unzwike sekunge uri kutengesa zvakaoma munzvimbo yako yese. Yako saiti inofanirwa kuve, kupfuura chero chinhu, mushandisi-yakatarisana. Izvo zvese ndezvekushandira kunze saiti yako kuti ugone kupa yakanakisa mushandisi ruzivo. Paunenge uchiita izvozvo, unogona kusanganisa nzira dzekutsigira dzinogona kusundira mberi kutendeuka.
Kutora Kubatsira kwekufamba uye Kupindura
Chekupedzisira, iwe unofanirwa zvakare kutarisa kukosha kwekufamba uye kupindura - zvinhu zviviri zvinounzwa nekupararira kwemafoni uye kuwedzera kunotevera kwekutsvaga uye kushandiswa kwenzvimbo kubva kumidziyo inobatwa nemaoko.
Yako saiti inofanirwa zvakare kukwanisa kupa iwo iwo iwo huwandu hwakaenzana hwehunhu ruzivo kune vashandisi vefoni kana uchienzaniswa nenzira dzechinyakare dzewebsite. Uine izvo mupfungwa, zvakanakisa kugadzira yako saiti kuti ive inoteerera kana yawanikwa kubva kune nhare mbozha. Kunze kwekuve chinhu chechiitiko chevashandisi, mobile kudavirira chinhu chakakosha chinzvimbo chega, kunyanya kuti injini dzekutsvaga dziri kutarisa zvakanyanya mumawebhusaiti enhare izvozvi.
Zvakanakisa kutora inoteerera webhu dhizaini, iyo inobvumidza yako saiti kuzvigadzirisa pachayo nechero chishandiso pasina chikonzero chekuuya neshanduro zhinji dzesaiti yako.
Wedzera UX yeakagadziridzwa SEO
Kutanga neruzivo rwevashandisi imwe yeiyo nzira dzakanakisa dzekuvandudza yako webhusaiti mu2019 chinhu chisingarambike chakakosha chinzvimbo, zvakangonaka kuti ushande pakuzvivandudza. Pane zvakawanda zvinobatanidzwa, uye zvimwe zvezvakakosha zvakanyorwa pamusoro. Zvirinani shanda munzvimbo idzi shanu, uye unenge uri munzira chaiyo mukuona kuti yako saiti ichave nemikana iri nani yekuwana nzvimbo iri nani mumhedzisiro yekutsvaga.
Tags: yemuno seoYeMahara neThebhu Kushambadziraorganic searchkusateereraux dhizaini
John Vuong ndiye oga muridzi weKunharaunda SEO Kutsvaga Inc,. Basa raJohn nderekubatsira varidzi vemabhizinesi emuno kuti vavandudze simba ravo repamhepo kuti vakwanise kutonga indasitiri yavo. Nebhizimisi rake acumen uye kunzwisisa kwekuzvarwa kwenzvimbo yebhizinesi yemuno, John anonyora mablog anoongorora maitiro ekugadzirisa SEO mishandirapamwe zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Mashandisiro Aungaita Iyo Mutengi Dhata Dhata Unogona Kuwedzeredza Yako Yekutengesa Strategic muna 2019